Manifesto 2: War Saxaafadeed - WardheerNews
In muddo ah ayaa bulshada Soomaaliyeed ay ka dhur-sugaysay in heshiis laga gaadho khilaafka soo jiitamayay ee u dhexeeya hoggaamiyayaasha dalka. Shaki kuma jiro in fursado badan oo Soomaalidu ay wax ku qabsan lahayd uu ku lumay khilaafkaasi. Haddaba waxa rajo iyo farax geliyay umadda Soomaaliyeed in 17-kii sebtember 2020, Dowladda Federaalka iyo Dowlad Gobolleedyadu ay gaadheen is afgarad ku aaddan doorashada 2020/21.
Manifestio– 2, waxay la wadaageysaa bulshada Soomaaliyeed soo dhoweynta war-murtiyeedkii ka soo baxay is-afgaradka Muqdisho. Waxaa hubaal ah in is-afgaradkaasi uu yimid goor ay howl-gab noqdeen hay‘addihii dowladda ee laga sugayay taaba-gelinta hannaanka dimoqraadiyadeed, xasilinta amniga iyo kobcinta dhaqaalaha dalka.
Haddaba kadib mudda afar sano ku dhow, waxa la isla gartay in laga badin-waayo in la qabto doorasho la muuqaal ah doorashadii afar sano ka hor la galay (doorasho dadban), oo ay ku timid dowladda hadda hoggaanka dalka haysa. Sidaa darteed wixii daddaal ahaa ee baxay, ee isugu jiray wakhti iyo kharaj, waxaa lagu tilmaami karaa hanti ka luntay faca Soomaaliyeed ee maanta nool. Waxaa kale oo muuqata haddii aanan si taxadar leh oo is-oggolaansho iyo wada-oggolid la waayo, in afarta sano ee xigta ay la soo daristo dalka dib u dhac kaleeto oo aan la qaadi karin.
Doorashada dadban ee uu heshiisku ka soo dejiyay meeshii ay dowladda ku laashay in la qabto doorasho wada ogol ah, waxa dalka laga badbaadiyay burbur iyo xasillooni daro mar kale la soo darista. Haddaba in is- faham iyo wadajir dib loogu soo celiyay taladii dad-waynaha iyo maamul-gobolleedyada matalayay, waa guul lagu saxay baal-markii Dastuurka, nidaamka Federaalka iyo wada-tashi la’aantii uu hoggaanka dalku ku socdey muddadaas afarta sano ku dhow. Taasi oo gaabis ku keentay higsigii iyo himiladii ay ummadda Soomaaliyeed ka lahayd in ay ku gaaraan doorasho qof iyo cod ah, doorasho xor ah oo xalaal ah oo dad-waynuhu ay ka wada-qaybgalaan.
Waxaanu hambalyo iyo bogaadin u direynaa Ra‘iisul-Wasaaraha cusub
Md. Maxamed Xuseen Rooble. Waxaanu kula talineynaa in uu muddo xileedkiisa kooban soo dhiso dowlad tayo leh ah oo dalka u diyaarisa doorasho xaq ah oo si xalaal ah ugu dhacda wakktigeedii. Si taas loo helona uu ka fogeeyo siyaasiyiinta lagu tuhmayo musuqa iyo iyo danaha gaarka ah.
Annaga oo u mahadcelineyna dhamaan madaxdii saxiixey heshiiskan iyo dowladaha caalamka oo ku gacan-siiyay, misana waxaa jira arimo mudan in la qeexo si dad-waynuhu ay ugu dhiiradaan taageerada meel-marinta qodobada heshiiska. Arimahaas oo ah kuwo ay dad-waynuhu ka wal-wal qabaan in ay dib u dhac u keenaan sii socodsiinta heshiiskan, islamarkaana aanan si dhab ah ugu caddayn qoraalka ku soo baxay war -murtiyeedkii shirka.
Qodobada uu caadku saaran yahay waa kuwan hoos ku xusan:
In dib loogu celiyo Baarlamaanka guddoominta go‘aamadii war-murtiyeedka ku soo baxay
In guddiga doorashada uu noqdo mid ka madax-bannaan fara-gelinta xukuumadda
Haddii qorshaha doorashooyinka ay bilaabanaysaa 1-da Nofember, in la caddeeyo goorta ay doorashadu dhacayso
Halkan ka akhri- Bayaankii Manifesti 2